Iingxabano zokuchasana - Ingxabano
Ngokuqinisekileyo, kukho ubungqina obuninzi obunokubaluleka kwesimo sengqondo esivumelanayo kwiimeko ezahlukeneyo. Ulwahlulo lwenkcubeko, ukuxhomekeka kwezenkolo, ukuchasana kweelwimi, ukuchasana kwezenzululwazi, ukuphazamiseka kwezinto ezivela kwimibono eyahlukeneyo yezemvelo okanye izikhundla ezihlukeneyo zentlalo: oku kukuqala kwoluhlu lwemithombo ekhuthaza ukunyaniseka kweembono ezihambelana nesihloko esithile.
Nangona kunjalo, ngezinye iimeko, umntu unokufuna ukumelana nombono wokuthi isimo esivumelanayo sisona sikhetele esona sikhokelo: kwezinye iimeko, kubonakala ngathi enye yeembono ezichaseneyo kufuneka zifumane ngakumbi ngakumbi kunabanye. Ziziphi na izizathu ukuba injalo ibango lenziwe?
Umhlaba wokuqala apho isimo sengqondo esingaxhatshazwayo sinokuchaswa yi nyaniso. Ukuba uyamkela i-relativism, ngelixa ubambe isikhundla esithile, kubonakala sengathi ukhawuleza ukuphazamisa eso sikhundla. Masithi, umzekelo, ukuba unokuthi ukukhipha isisu akusayi kuvunyelwa, ngelixa uvuma ukuba isigwebo esinjalo sinxulumene nokukhuliswa kwakho; akunjalo ngokukhawuleza uvuma ukuba ukukhipha isisu kunokuvunyelwene ngokufanelekileyo nalabo babekhuliswe ngendlela eyahlukileyo?
Ngaloo ndlela, kubonakala ngathi, umxhasi ozinikela enyanisweni yebango X, ngelixa ephethe ngokukhawuleza ukuba i-X ayinakwenyaniso xa icatshulwa kwindlela eyahlukileyo . Oko kubonakala kukuphikisana ngokucacileyo.
Iphuzu lesibini eliye ligxininiswa kukuba kukho impawu zendalo yonke kwiinkcubeko ezahlukeneyo. Inyaniso ngokwaneleyo imbono yomntu, ubuhle, obuhle, yentsapho, okanye yepropati yangasese ehluke kuzo zonke iinkcubeko; kodwa, ukuba sibheke ngokusondeleyo, sinokufumana iziganeko eziqhelekileyo. Akunakuphikiswa ukuba abantu bayakwazi ukulungelelanisa uphuhliso lwentlalo kwiimeko apho bahlala kuzo.
Kungakhathaliseki ukuba ngubani obazali bakho, unokufunda isiNgesi okanye iTagalog ngokulinganayo xa ukhula kunye noluntu lwaseburhulumenteni olunye ulwimi okanye olunye ulwimi; ukuxhomekeka kwiimpawu ezinxulumene nezakhono okanye izixhobo zomzimba, njengokupheka okanye ukudansa.
Iimpawu eziqhelekileyo kwiPerception
Nangona kufikelelwe ekuboneni, kulula ukubona ukuba kukho isivumelwano kwiinkcubeko ezahlukeneyo. Kungakhathaliseki ukuba yintoni inkcubeko yakho, kunokwenzeka ukuba inyikima enamandla okanye i-tsunami enobukrakra iya kubangela ukwesaba kuwe; kungakhathaliseki ukuba ukhuliswe njani kuluntu, uya kutshukunyiswa ubuhle be Grand Grand Canyon. Ukucinga okufanayo kufaka ukukhanya kwelanga emini okanye ukuziva kuphazamisekile kubangelwa igumbi kwi-150 degrees Fahrenheit. Nangona kunjalo ngokuqinisekileyo ukuba abantu abahlukeneyo bafumana amava ahlukeneyo kwimibono yeembono, kubonakala kubonakala ukuba yinto ebalulekileyo ekwabelwana ngayo, ngokubhekiselele kuyo i-akhawunti engeyiyo-relativistic yokujonga.
Okokuya kucinga kukuya kwintsingiselo yamagama ethu, oko kufundiswa liSebe lefilosofi yeelwimi elihamba phantsi kwegama leSemantics . Xa ndithi "i-spicy" andiyi kuthetha ukuba uthetha ntoni na; ngexesha elifanayo, kubonakala ukuba kufuneka kubekho uhlobo oluthile lokungabonakaliyo ukuba uluncedo lusebenzayo nonke.
Ngaloo ndlela, oko kwam amazwi athetha ukuba akunakulinganiswa ngokuthe ngqo kwimbono yam kunye namava, kwintlungu yokungakwazi ukuthetha.
Ukungena kwi-relativism kwiStanford Encyclopedia of Philosophy .
Ukungena kwi-relativism kwi- Internet Encyclopedia ye-Philosophy .
Ukungena kwi-moral relativism kwiStanford Encyclopedia of Philosophy .
Ukungena kwiingcamango zengqondo kwiIntern Encyclopedia of Philosophy .
Fumana ngokuqhelekileyo ngeJeep Gladiator Concept Truck
I-Legend of Urban Man
Uphuhliso lweeNkokeli zamaKristu
Ukusebenzisa i-Astrology yaseTshayina Ukuxelela i-Fortune yakho
AmaMaya aseMandulo okanye iMeya? Yiyiphi Ixesha eliMkeleke kakhulu?
Usuku loNyulo 2016
Isono kwi-Islam kunye nemisebenzi engavumelekanga